Mitambo uye kunyorera kuri kutengeswa kwenguva shoma (Zvita 28) | IPhone nhau
Nhasi izuva raApril Mapenzi, uye ndinokuyeuchidzai kuti harizopera kusvika pakati pehusiku manheru. Uye kunyangwe ndichive nechokwadi chekuti vanopfuura mumwe wenyu vachange vatora pane dzakawanda nhau dzenhema dzichiri kutenderera pa network nhasi, ndinokuvimbisai izvozvo Unogona kudzikama nekuti mitambo inotevera uye zvinoshandiswa zviri kutengeswa chaizvo, hapana majee.
Ehe, iro raApril Benzi senguva dzose nderekuti ini ndinogona kungokuvimbisa izvozvo Zvipo zviripo panguva yekuburitsa ichi posvo. Kusvika riini iwe paunogona kutora mukana nezvezvikwereti? Zvakanaka chokwadi, hapana zano. Saka une sarudzo mbiri: (1) bvunza mugadziri wacho zvakananga kana (2), usafunge kaviri wobva wadzvanya pakananga kurodha pasi link kuApp Store, zvinova ndizvo zvandaizokuitira.
2 Budget uye mari yekutevera
3 Energy Saver - Tsvaga mari uye chengetedza iyo Planet
4 Chinyorwa Chezvitoro - Yeuka Kutenga
5 Hondo Yangu iyi
Inotumidzwa naTouchArcade seimwe yemitambo yakanakisa yegore ra2016, mu Crashlands Iwe unozotora kuzivikanwa kweFlux Dabes, galactic trucker anoisa zvisirizvo kutumira kwake kwekupedzisira nekuda kwekutyisidzira kwevatorwa kunonzi Hewgodooko, achikusiya uri wega pane imwe nyika yepanyika. Sezvo iwe uchida kudzosera mapakeji ako kumashure, iwe unozobatirirwa muhurongwa hwekutonga hwenyika hunoda huchenjeri hwako hwese. Unofanirwa kudzidza zvidobi zvemuno nezvakavanzika, uwane shamwari nyowani, uye pakupedzisira uvake "imba kure nemusha uchidzidzira kubudirira papasi reWoanope."
Crashlands Iine mutengo wenguva dzose we4,99 euros asi iwe unogona kuiwana izvozvi ne60% dhisikaundi kune chete 1,99 €
Budget uye mari yekutevera
Budget uye mari yekutevera Icho chinhu icho ichakubatsira iwe kuteedzera zvaunoshandisa munzira "yakapusa uye yakapusa". Iwe unogona kubata yako yemazuva ese mari yekushandisa kuti uzive kuti yako mari yaenda kupi. Yayo akawanda mabasa anosanganisira iyo sarudzo yekugadzira yakasarudzika bhajeti, kubatanidzwa neyekuzvarwa iOS Calendar, backup kuburikidza neICloud, kuwiriranisa pakati pemidziyo, kubika, kuverenga manhamba, dhata rekutumira muExcel (CVS) fomati., Mari shanduko dzinoverengerwa otomatiki maererano mwero wekutsinhana, chikamu chikamu uye chinyorwa chenyu chemari, zvichingodaro.
Budget uye mari yekutevera Iyo ine mutengo wenguva dzose we 2,99 euros asi iwe unogona kuiwana izvozvi zvachose yemahara kwenguva shoma.
Energy Saver - Tsvaga mari uye chengetedza iyo Planet
«Simba Saver iri iyo inokurumidza nzira yekuchengetedza mari »pakushandisa simba. Iwe unozokwanisa kuona zvakakwana manhamba esimba rako rekushandisa kwezuva kana kwegore rese uye zvinokupa iwe mazano ekuderedza kushandiswa kwesimba uye nekudaro kuchengetedza mari.
Wana matipi ekuderedza kushandiswa kwesimba uye chengetedza mari
Ona huwandu hwakazara hwekushandisa kwesimba rako
Ona matafura emagetsi ekushandisa mukamuri yega yega mumba mako
Sarudza maitiro aunoda kuti zviwanikwe kuti zviverenge, kwezuva rimwe chete kana kwegore rese
Energy Saver - Tsvaga mari uye chengetedza iyo Planet Iyo ine mutengo wenguva dzose we 2,99 euros asi iwe unogona kuiwana izvozvi zvachose yemahara kwenguva shoma.
Chinyorwa Chezvitoro - Yeuka Kutenga
Wadzoka kangani kubva pakutenga vhiki uye pawakasvika kumba wakaziva kuti wakanganwa kutenga chimwe chinhu kana chimwe? Iine Grocery Rondedzero izvi hazvichazoitika kwauri sezvo chiri chakatarwa app ye gadzira rondedzero yekutenga Asi chenjera, nekuti harisi runyorwa rwakareruka sezvo iine akawanda mabasa auri kuda.
Chinyorwa Chezvitoro - Yeuka Kutenga Iine mutengo wenguva dzose we2,99 euros asi iwe unogona kuiwana izvozvi ne66% dhisikaundi kune chete 0,99 €
Hondo iyi ndeyangu zvinoshamisa yehondo mutambo mutambo zvisina kana chinhu chawaona kusvika parizvino nekuti apa haufunge kuti murwi anorwa hondo dzinoteura ropa, asi uchava nharaunda yemaguta akapoteredzwa ari muguta rakakombwa nehondo. Iwe uchafanirwa kuita sarudzo dzakaomarara dzinozoisa tsika dzako nehunhu hwako kuyedza, asi nguva dzose uine chinangwa chimwe chete: kupona.
Hondo iyi ndeyangu Iine mutengo wenguva dzose we14,99 euros asi iwe unogona kuiwana izvozvi ne80% dhisikaundi kune chete 2,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Mitambo uye maapplication ari kutengeswa kwenguva yakatarwa (Zvita 28)
8x16 podcast: Apple muna 2016, mwenje nemimvuri mugore rekuchinja